Blenheim, Marlborough, i-New Zealand
Ikamelo e-ikhaya eliyindawo yokuhlala ibungazwe ngu-Roberta
Sinikeza indawo yokulala yangasese ephansi, enegumbi lokugezela langasese. Sitholakala eduze kwe-Pollard Park enenkundla yegalofu nezingadi ezinhle phakathi nazo zonke izinkathi zonyaka. Isifundo se-Waterlea Race siyimizuzu emi-3 ukusuka lapho. Isikhungo sedolobha i-Blenheim singaphakathi kohambo oluthambile lwemizuzu eyi-15. Izitolo zewayini ezidumile emhlabeni wonke zitholakala kalula njengezitolo ezinkulu, amathilomu namabha.
Ingxenye yomndeni wethu nguGracie Pug ozokwamukela ngemfudumalo.
Sikuhambo lwemizuzu emibili ukusuka ePollard Park enhle lapho kukhona izinkundla zethenisi.inkundla yegalofu kanye nezinsiza eziningi. Futhi uhambo lwemizuzu eyishumi ukusuka e-CBD futhi usuka esitolo esikhulu, ekhemisi nasekhefi, uhambo lomfula kanye nezinye izinto eziningi esikujabulela ukuhlala lapha.
Sifinyeleleka kakhulu ezivakashini zethu futhi ngaphezu kokujabula ukudlulisa ulwazi mayelana nesifunda sethu ukuze senze izivakashi zethu zihlale e-Marlborough into evelele ohambweni lwazo.
Hlola ezinye izinketho ezise- Blenheim namaphethelo